हरेक दिन भगवानलाई आदर गर्नुहोस्, विश्वव्यापी चर्च अफ गॉड स्विजरल्याण्ड (WKG)
जब म अफिसमा जान्छु वा व्यापारिक व्यक्तिहरूसँग भेट्छु, म केहि विशेष प्रकारको गर्छु। म घरमा हुँदा म दिनको लुगा लगाउँछु। मलाई पक्का विश्वास छ कि तपाईंसँग पनि यो छ - केहि आधा पोशाक जीन्स वा दागयुक्त शर्ट।
जब तपाईं भगवान्को आदर गर्ने बारेमा सोच्नुहुन्छ, के तपाईं विशेष कपडा वा दैनिक कपडाको बढी सोच्दै हुनुहुन्छ? यदि उहाँलाई सम्मान दिनु भनेको हामी हरबखत गर्छौं, हामीले दैनिक सर्तहरूमा सोच्नु पर्छ।
एउटा सामान्य दिनको बनाउने कार्यहरूको बारे सोच्नुहोस्: काम गर्न ड्राइभिंग, स्कूल वा किराना पसलमा, घर सफा गर्ने, लन काट्ने काम, फोहोर हटाउने, तपाईंको ईमेलहरू जाँच गर्ने। यी कुनै पनि चीज अपवादात्मक छैनन्, र ती मध्ये धेरैलाई सुन्दर कपडाको आवश्यकता पर्दैन। जब भगवानको सम्मान गर्ने कुरा आउँछ, त्यहाँ कुनै फिगरहेड छैन, "शर्ट छैन, जुत्ता, कुनै सेवा छैन।" उसले हाम्रो श्रद्धाञ्जलीलाई "तपाईं जस्तो हुनुहुन्छ" आधारमा स्वीकार गर्दछ।
म धेरै तरिकामा भगवान्को सम्मान गर्न सक्छु, र मैले यो पनि फेला पारे कि जब मैले जानाजानी उहाँलाई सम्मान गर्ने कोसिस गरेको छु भने म अत्यन्तै सन्तुष्ट छु। यहाँ मेरो जीवनका उदाहरणहरू छन्: ममाथि आफ्नो सार्वभौमिकता पुष्टि गर्न र अरूको लागि प्रार्थना गर्न समय निकाल्नुहोस्। अन्य मानिसहरूलाई भगवानको दृष्टिकोणबाट हेर्न र त्यसै अनुसार व्यवहार गर्न।
मेरो परिवार र घरमा मेरा जिम्मेवारीहरू पूरा गर्न। सही कुरा खाँदै, व्यायाम गर्दै र पर्याप्त निन्द्रामा (मेरो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो)। मेरा समस्याहरू र मेरो भगवानमा परिवर्तनको आत्मसमर्पण गर्दै र उहाँबाट परिणामको लागि प्रतिक्षा गर्दै। उपहारहरू प्रयोग गर्नका लागि उनले मलाई आफ्नो उद्देश्यका लागि दिए।
के तपाईं दिनहुँ भगवान्‌को आदर गर्नुहुन्छ? वा यो केहि समय हो जुन तपाईं "लुगा लगाउँनुहुन्छ" को लागि बचत गर्नुहोस्? के यो केवल तपाई चर्च जान जानुहुन्छ?
यदि तपाईं "ईश्वरको उपस्थिति अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ" बाट हुनुहुन्न भने। ("भगवानको उपस्थिति अभ्यास गर्नुहोस्") सुनेको वा पढेको, म तपाईंलाई यो सिफारिश गर्दछु। भाइ लरेन्स एक भिक्षु थिए जो १ 17 औं शताब्दीमा बस्थे र दैनिक जीवनका सामान्य चीजहरूमा परमेश्वरको आदर गर्नुको अर्थ के हो भनेर सिके। उसले मठको भान्छामा धेरै समय खर्च गरे। त्यहाँ उनले मलाई ठूलो आनन्द र सन्तुष्टि भेट्टाए जब म खाना पकाउने वा सफा गर्ने बारेमा गनगन गर्छु!
मलाई आफ्नो काम शुरू गर्नु अघि उनले भनेका प्रार्थना मन पराउँछन्: "हे भगवान, किनकि तपाईं मसँग हुनुहुन्छ र अब मैले आज्ञा गरेको कुराप्रति आज्ञाकारी हुनै पर्छ - यस बाह्य काममा ध्यान दिनुहोस्। म तपाईंलाई सोध्छु, तपाईंको उपस्थितिमा यो जारी राख्न मलाई अनुग्रह प्रदान गर्न। यस लक्ष्यलाई मनमा राख्दै, मेरो काम तपाईंको सहयोगले फस्टाउन सकोस्। म तपाईंको लागि सबै चीजहरू राख्छु, साथै मेरो सारा प्रेम पनि। "
उनले आफ्नो भान्साको कामको बारेमा भने: "मेरो लागि यो काम गर्ने समय प्रार्थनाको समयभन्दा फरक छैन। मेरो भान्छाको हल्ला र हल्लाले गर्दा, धेरै व्यक्तिको बिभिन्न इच्छा छ, तर म शान्तिपूर्वक परमेश्वरलाई रमाउँछु जस्तो म वेदीमा घुँडा टेक्दा संस्कारका लागि तयार छु। लिनु
हामी ईश्वरको उपस्थितिलाई अभ्यास गरौं, हामी जे भए पनि, र उहाँलाई दैनिक कामहरूमा आदर गरौं। हामी सफा गर्दै र भाँडा क्रमबद्ध गर्दा पनि।